IziBonelelo zokuSebenzisa inethiwekhi yeDidiya yeHlabathi yeZemidlalo eziBaluleke kakhulu-I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Usasazo lwaseburhulumenteni lweNAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » Okufumaneka » IziBonelelo zokuSebenzisa inethiwekhi yeMidiya yeHlabathi yoBomi obuPhezulu beXabiso
Ngeentengiso zemidlalo ephezulu yemidlalo ephilayo iba yinto yehlabathi jikelele, ukubaluleka kokudibana neqabane kunye nokufikelela okufikelelekayo kuya kuba yinto ebaluleke ngakumbi.
Ngelixa imisitho yezemidlalo ephambili kwikhalenda ibisoloko iyipropathi yehlabathi, abanini-malungelo baqhubeka befumana iimfuno zelizwe kuwo onke amanqanaba ezemidlalo. Iqela kunye nemibutho iyakwazi ukwakha ababukeli ngaphaya kweendawo zabo zasekhaya, ukunxibelelana kunye nabaphesheya baphesheya kwelinye icala nokwakha ababukeli abatsha kwelinye. Ukusuka ekungqineni kweebhulukhwe zebhola ekhatywayo zamazwe aphesheya kweAsia ukuya kuthi ga ekudumeni okukhulu kweqakamba phakathi kwabalandeli abaphantsi e-USA, ezemidlalo yinto eyenzeka kwilizwe liphela eya ngaphaya komjikelo weembaleki eziphambili kunye nemidlalo.
Ukudibanisa imidlalo kunye nabaphulaphuli
Ukuhanjiswa komxholo ovela e-USA kuphela obeka i-20% yemakethi yehlabathi, kunye nonxibelelwano oluhanjiswa yi-Telstra ukuya e-Asiya kwihlabathi jikelele ukuhambisa umxholo wezemidlalo kunye nokuzonwabisa kubabukeli behlabathi. Inethiwekhi yeTelstra Global Media Network (GMN), kunye nothungelwano lwamaqabane ethu, ifikelela ngaphezulu kwamanqaku e-300 yobukho e-USA. Oku kubonelela nge-bandwidth ephezulu kunye nokufikelela okuqinisekisiweyo, ukudibana nomgangatho wokuqhubeka kwenkonzo kunye neemfuno zokunxibelelana zomxholo wevidiyo ephezulu yexabiso. Iindlela zethu ezisibhozo zokuhambisa i-pac-pacific cable zidibanisa i-United States kunye neemakethi eziphambili zelizwe lonke ngingqi ye-Asia-Pacific kunye nokuhambisa i-20TB yomthamo wekhebula ngaphakathi kunye nelizwe.
Imakethi yase-US kunye namandla ethu e-Asia nangona iyinxalenye yomfanekiso. I-Telstra ibonelela ngothungelwano olubanzi lwehlabathi lonke elingaphezu kwe-250,000 yeemayile, ngokufikelela nangaphezulu kweendawo ze-2,000 zobukho kumazwe angaphezu kwe-200 kunye nemimandla kwihlabathi liphela. Sikwabonelela ngoqhakamshelwano kumaziko edatha e-58 kwihlabathi jikelele yenye yezona ndawo zidityanisiweyo zedatha yeenyawo kwimimandla yeAsia-Pacific. I-Telstra GMN Partner Alliance ibonelela ngofikelelo olongezelelekileyo kwiziphelo zokuphela kwe-2,500, kubandakanywa imidlalo ye-1,000 kunye nabathengi beendaba, iindawo ze-1,500 zemidlalo ekumgangatho ophezulu, kunye ne-10 teleports yehlabathi.
Oku kusenza sikwazi ukuyila isisombululo senethiwekhi yemithombo yeendaba kwezona mfuno zingqongqo, zokukhokelela kwiimpawu zemidlalo kunye neenkampani. Sisebenze kunye ne-WTA Media ukuyila inethiwekhi ekhethekileyo yehlabathi enakho ukuhambisa ividiyo kwi-WTA Tour's 47-plus indawo kwilizwe jikelele. Oku kubandakanya uqhagamshelo lwendibaniselwano 'olubini nolwahlukeneyo' olwenzelwe iimfuno ezingqongqo zevidiyo ebukhoma, enokwakhelwa ngokutsha ngokutsha kunye neendlela ezimbini ezahluka-hlukeneyo zendlela ukuya kwi-WTA Media hubs yokuqaqadeka kunye nokuqina. Isitshixo kwimpumelelo kukukwazi kwefayibha ukukala, evumela i-WTA Media ukuba igubungele iziganeko ezininzi ngokulandelelana, ekhokelela ekwandeni komxholo ukusuka kumdlalo we-700 ngonyaka ukuya ngaphezulu komdlalo we-2,500 ngexesha elinye.
Ukuvumela ukwenziwa kwezinto ezintsha
Siyayazi indlela ezisebenza ngayo ezemidlalo. Ukusuka ekuziseni iindlela ezingcono zokuhambisa umxholo ukusuka kwii-angles zekhamera eyahlukileyo kwimisitho emikhulu kwihlabathi jikelele usebenzisa iGlobecbecam, ukubeka iliso kwimicimbi ephilayo ukusuka kwilizwe lethu lobugcisa beTelista Broadcast Center, okanye ukusasaza umxholo ukuya e-Asia nangaphaya, ubuchule bethu kwezemidlalo buvumela ubuchule kunye nabathengi bethu e-Australia nakwihlabathi liphela.
Ayisiyo kuphela isilinganiselo senethiwekhi yeTelstra eqinisekisa umgangatho ophezulu, wokuhambisa ividiyo ngokuthe tye, kubasasazi kunye nabaphulaphuli, ikwangumboneleli ophambili kwi-pivot eya kwimveliso yasekhaya. Ukusuka kwintsebenziswano yethu ne-Fox Sports Australia kunye ne-NEP Australia ukukhupha inethiwekhi ye-Australia ngokubanzi ye-Distributed Production (i-DPN) yemveliso esekude yeTier One yemidlalo ukusukela kwi-NEP Andrews Hub eSydney naseMelbourne, ukuya kwindawo ekude ye-Trans-Pacific ekude ukuveliswa kwi2018 phakathi kweSydney kunye los Angeles, le yinto entsha eqhelekileyo. Kutshanje, i-DPN yethu ihambise i-30 HD Ikhamera ephilayo kunye nemizobo ephambili evela kwiiNtshatsheli zeHlabathi eziDibeneyo zeJapan kwiJapan, i-8,000 km ukusuka eNissan Stadium eYokohama ngeTokyo ukuya kwi-NEP Andrews yemveliso yokuvelisa eSydney.
Amandla okunyusa amandla kunye nomthamo womnatha weTelstra usenza ukuba sikwazi ukwenza izinto ezintsha kwezinye iindawo zomdla kubasasazi bezemidlalo. Iikhithi zethu ezincinci zekhamera yeGlobecam, umzekelo, zakhelwe ukubamba inyathelo le-octane eliphezulu leminyhadala yemidlalo nokunikezela ngamava okujonga ngokuntywila. Iikhithi zilula, zibumbene kwaye zisebenzisa ubuchwephesha bokudibanisa isantya esisezantsi ukuze zifumane kwaye zidlulise umxholo ophilayo ngqo ukusuka kumhlaba wokudlala okanye wenkundla, nokuba zisasazwa njenge-RefCam, iNetCam, i-UmpireCam, okanye iHelmetCam, kuxhomekeke kwezemidlalo. I-Globecam inikezelwa njengenkonzo elawulwayo kwaye inokulungelelaniswa ukuze ihambelane neemfuno ezizodwa zeekhowudi zemidlalo, abaququzeleli beminyhadala, kunye nabasasazi.
Umgangatho oqinisekisiweyo weNkonzo
Nokuba kungokusetyenziswa ixesha elide okanye ngamanye amaxesha, ubungakanani kunye nobubanzi beTelstra Global Media Network ngokudibeneyo namaqabane ethu kuthetha ukuba sinesakhono sokuhambisa umxholo wakho ngomgangatho wenkonzo oqinisekisiweyo apho kwaye nalapho kufuneka khona. Sineminyaka yamava yokuhambisa umxholo ngaphakathi nangaphandle kwe-Asiya - inenethiwekhi enkulu ye-subsea cable kwingingqi ye-Asia-Pacific, ethwele ukuya kwi-30% yokugcwala kwe-Intanethi yendawo kunye nokunikezela ukufikelela kwelona ndawo ininzi ye-intra-Asia lit -Nobuhlakani bethu kwenye indawo kwihlabathi liphela buqinisekisa ukuba sinikezela ngesisombululo esisiso sehlabathi.
Umthamo womnatha wethu sisisombululo esifanelekileyo sokujongana nemfuno ekhulayo yeNkcazo ye-Ultra High evela kwintengiso yezemidlalo, ngelixa ubonelela ngothungelwano olomeleleyo kunye nonxibelelwano olukumgangatho ophantsi oluyalela imfuno ekhaya. Ivumela uqhagamshelo ngqo kubasasazi abaphambili kunye neendawo eziphambili zehlabathi, ngelixa iZiko lethu loSasazo lweHlabathi Jikelele kunye namaGumbi oMbane oLawulo lweNdawo e-Asia, e-USA naseYurophu baqinisekisa ukuba yonke imixholo ibekwe iliso kwaye ilawulwa ukujikeleza ixesha.
Ezemidlalo kukuthanda kwehlabathi. Ukufikelela kubaphulaphuli abakhulayo kwaye uhlangabezane nemfuno eyandayo yomxholo wokuhlala wabalandeli kwihlabathi liphela, into efunekayo yinkonzo enokufikelela, i-bandwidth, kunye nokuzinza okubonelelwa yiTelstra Global Media Network.
Umbhali: uAnna Lockwood, iNtloko yeNtengiso yeHlabathi, Iinkonzo zokuSasazwa kweTelstra-Inombolo yokuma kwe-IBC (ukuba ikhona): IHolo 14.F18
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Iintetho kunye nemisrya i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC Injini yeVidiyo	2019-08-19
Previous: Uyilo lweNtshukumo yoNyaka yokuHanjiswa kweMveliso yoNtu oMnyama yoQokelelwano Beauregard
next: Ngaphakathi kwiXesha le4 le "Veronica Mars" (iNqaku 2 le2)